15 | August | 2015 | Love Joshi
(१३०) पशुपतिनाथको दर्शन गर्न मानव सागर उर्लियो
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १३० )
२०७२ साउन १८ गते सोमवार
पशुपतिनाथको दर्शन गर्न मानव सागर उर्लियो
आज साउन महिनाको तेस्रो सोमवार । कमलाले भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने इच्छा गरेकीले प्रात:काल ५:३० बजे नै प्राँगणमा पुग्यौं ।बोलबम काँवरिया भक्तजनहरुको ला—-मो लाम थियो । त्यो लाममा किशोर,किशोरी, युवा-युवति र पाका भक्तहरुको संयोजन थियो । हिमालवासी, पहाडवासी,तराईवासी र सहरवासी सबैतिरकावासी थिए । एउटै मनोकाँक्षाका थिए – शिव दर्शन । एउटै स्वर थियो – ” बोलबम ! बोलबम !! बोलबम !!! पहेंलपूरी भएको थियो , आराध्यदेवको प्राँगण । स्वस्फुर्त थियो भेला ।समर्पण थियो , उत्सर्ग थियो । कस्को निम्तोमा आएका थिए त्यो मानव सागर ? उनीहरुमा कुनै राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह थिएन । यस्ता शिव भक्तहरुको देशलाई कस्ले चाहेको हो धर्मनिरपेक्ष बनाउँन ? को हो त्यो जसले भन्छ – ” राज्यको कुनै धर्म हुंदैन”भनेर ? त्यो नेपालको माटोमा जन्मेका हैन र ? त्यसले खहरे खोलाको एक अंजुली पानी पिएको छैन र ? बहुसंख्यक जनमानसको कदर संघीय गणतन्त्रमा हुंदैन र ? के नेतातन्त्रको मनपरी हुन्छ र प्रजातन्त्रमा ?
(१२८) गुरु पूर्णिमाको महत्व र गुरू महिमा
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १२८ )
२०७२ साउन १६ गते शनिवार
गुरु पूर्णिमाको महत्व र गुरू महिमा
विगत केही वर्षदेखि गुरु पूर्णिमा पर्व औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । उपल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरुले यो पर्व मनाउन केही अर्थ संकलन गर्दछन् । गुरूवर्गलाई सम्मान गर्दछन् । शिक्षक र विद्यार्थीको तर्फबाट एक दुई नैतिक भाषण ठोकिन्छ । अर्को दिनदेखि फेरि त्यही यन्त्रवतका क्रियाकलाप । केही पाकाहरुको यस्तो भनाइ सुनें डिल्लीबजारको चौकमा- ” अहिले गुरु, गुरु जस्तो छैनन् । चेला, चेला जस्तो छैन । गुरूलाई मूल्यमा तौलिने गरिन्छ ।शिष्यलाई एउटा उत्पादन / Product को रुपमा । विकाउका चीज हुंन् जस्ता । शिष्यको तानातान हुन्छ, भर्ना गर्ने गराउने बहानामा। विदेशी शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु खोल्छन् मेलाहरु । यिनलाई कुनै रोकटोक छैन ।हजारौं कलिला छात्रछात्राहरु विदेशिन्छन् , गतिलो र गुनिलो कलेज विश्वविद्यालयका खोजमा । बेखबर छन् सरकारी निकाय । कानमा तेल हालेका र बाँधेका छन् आँखामा पट्टी ,यहाँका नेताजीहरुले । गुरुहरु मौन व्रतमा छन् ।”
(१२७) गुरु पूर्णिमा
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १२७ )
२०७२ साउन १५ गते विहिवार
गुरु पूर्णिमाको पावन पर्वमा आदरणीय समस्त मार्ग दर्शक गुरुवर्गमा हार्दिक प्रणाम गर्दछु ।
(१२५ ) शिक्षक टाइम पिस बन्नु पर्दछ ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १२५ )
२०७२ साउन १२ गते मंगलवार
शिक्षक टाइम पिस बन्नु पर्दछ ।
शिक्षक बन्ने ब्यक्तिले सदा समय पालन गर्नु पर्दछ भनेर मेरा अग्रज आदरणी गुरुहरुले भन्ने गर्नु हुन्थ्यो । म शिक्षक बनेपछि यो कुरा अनुभूत गरें । समयमा विद्यालय पुग्ने गर्नाले प्र.अ. ,संचालक समिति र अभिभावक-विद्यार्थी सबै खुसी हुंदा रहेछन् । केही work cheat / काम ठग सहकर्मीहरु भने इर्ष्या गर्दा रहेछन् । यिनीहरु शिक्षण पेसालाई दोस्रो दर्जाको ठान्ने, प्लेट फर्म बनाइ कुरेर बस्ने र मौका पाउनासाथ अर्कै पेसामा लाग्ने खालका हुन्छन् ।समयमा पुग्नु, समयमा कक्षा लिने, समयमा कक्षा छाड्ने र निर्धारित समयमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी रिजल्ट दिने शिक्षकको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । लामो समयसम्म प्रधानाध्यापक हुंदा पनि मैले समय पालन गरें । शिक्षक टाइम पिस बन्नु पर्दछ ।
(१२३)त्यहाँ केटा र केटीले गर्ने कामको स्पष्ट विभाजन देखियो ।
शिक्षण जीवनका अनुभवहरु ( १२३ )
२०७२ साउन १० गते आइतवार
त्यहाँ केटा र केटीले गर्ने कामको स्पष्ट विभाजन देखियो ।
कुरा २०२७ सालतिरको हो । म बुटवल -खस्यौली नगर पंचायतद्वारा संचालित अनिवार्य नि:शुल्क प्राथमिक पाठशाला केन्द्र नं.१ कालिका नगरमा पढाउँथें । म पढाइ लेखाइको मामलामा अलिक कडाइ गर्थें । गृह कार्य नगर्ने विद्यार्थीलाई केही न केही सजाय दिन्थें । एक दिन १० / १२ जनाले गृह कार्य गरेर ल्याएनन् । तिनीहरुलाई विद्यालय पछाडि लगें । त्यहाँ खेतमा सिंचाइ गर्ने कुलो थियो । “लौ तिमीहरु १० मिनट कुलोमा उभिएर बस”, मैले निर्देशन दिएं । एउटा गएर पानी छोयो ।”ओ हो , मरिन्छ ।” , भन्न थाल्यो । ढीलो विद्यालय भर्ना भएका केटीहरु लजाउन थाले । म आफै कुलोमा एकछिन उभिनु थालें ।पानी चीसो थियो ।किन कि जाडो याम पुस थियो । दिन लागेको सजाय रोकें ।विकल्प सोचें । भने- “भैगो, जाडो छ । कक्षा कोठा सफा गर अथवा करेसाबारी गोडमेल गर । रोजेर काम गर ।”
छात्रहरु करेसाबारी तिर गए । छात्राहरु कक्षा कोठा सफा गर्न गए । त्यहाँ केटा र केटीले गर्ने कामको स्पष्ट विभाजन देखियो ।